कहाँ हरायाे कुमारीकाे हिराजडित मुकुट ? – Everest Dainik – News from Nepal
कहाँ हरायाे कुमारीकाे हिराजडित मुकुट ?
काठमाडौँ, साउन ३ गते । वसन्तपुरकी कुमारीको हीराजडित मुकुट खोजीको विषय भएको छ । कुमारीका साथमा रहेका गरगहना जाँच गर्दा यो मुकुट जाँच समितिले पनि अवलोकन गर्न पाएको छैन । गत वर्ष गुठी संस्थानको एक समितिबाट गहना जाँच भएको थियो ।
श्रीकुमारीको नित्यपूजा गर्नुहुने हनुमानढोका तलेजुका मूल पुजारी उद्धव कर्माचार्य स्पष्ट गर्नुहुन्छ, “लेखक रोवट एन्ड लिन्डा फेलिङले लेख्नुभएको ‘काठमाडौँ भ्याली’ नामक पुस्तकमा विसं २०३२ मा श्रीकुमारीले लगाएको यो मुकुटसहितको फोटो प्रकाशित छ तर यो फोटोमा देखिएको मुकुट कहाँ छ, अत्तोपत्तो छैन । ” यसपछिका नियुक्त कुमारीले यो मुकुट लगाएको पाइएको पनि छैन ।
गहना जाँचमा संलग्न गुठी संस्थानका अधिकृतत्रय हरिप्रसाद जोशी, जयप्रसाद रेग्मी र राजेन्द्र दाहाल तथा संस्थानका सहप्रशासक दीपकबहादुर पाण्डेले आफूहरूले यो मुकुट जाँचका क्रममा अवलोकन नगरेको बताउनुभयो । गुठी लगत कार्यालय प्रमुख दाहालले बेचल्तीका गहना मात्र जाँच भएको बताउनुभयो । गहना जाँचका क्रममा कुमारीलाई राज्यका तर्फबाट चढाइएका २२ वटा औँठी सुन नै नभएको पाइएको सहप्रशासक दीपकबहादुर पाण्डेले स्पष्ट पार्नुभयो ।
मुकुटबाट जोडिएर दुवै कानतर्फ लत्रने हीराजडित लर्कन पनि कहाँ छ ? खोजीको विषय भएको जानकार बताउँछन् । २०३२ सालयताका कुमारीलाई मुकुटको सट्टा फूलको गुच्छा आकारको भुवादार रातो कपडाको मुकुट लगाएर रथयात्रा गराउने गरिएको छ ।
सिद्धिचरणचोक न्युरोड दफ्तर क्लबका अध्यक्ष राकेश शाही यो मुकुट सहरवासीका लागि कौतुहल र जिज्ञासाको विषय भएको बताउनुहुन्छ । रथयात्राबाहेक विभिन्न पर्वमा सहरयात्रा गराउँदा पनि यो मुकुट कुमारीको शिरमा देख्न नपाएको शाहीको भनाइ छ ।
गाेर्खापत्र दैनिकमा सराेज अाचार्यले लेखेकाे समाचार साभा गरिएकाे
ट्याग्स: कुमारि, मुकुट